Dhageyso:-Dowladda Oo loo diray digniin ku aadan Shirka dib uhishiisiinta Galmudug – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Xili dhawaan la filayo in magaalada Dhuusamareb ee Caasimada dowlada Goboleedka Galmudug uu ka furmo shirka dib u hishiisiinta beelaha galmudug ayaa waxaa soo baxaya walaac ay muujinayaan Odayaasha dhaqanka.
17-bisha oo ku beegan maalinta Sabtida ah ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuudamereb oo ka furmo shirka dib ushiisiinta Galmudug waxaana soo baxaya warar sheegaya in Odayaal kabaxaya Muqdisho ay shirkaasi ka qayb galayaan.
Nabadoon yuusuf shire oo ka mida wax garadka waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ka digey in diyaarado lagu daabulo odayaal dhaqameed laga keenayo Muqdisho, kuwaasi oo ka qeyb galaya shirka la filayo inuu ka qabsoomo magaalada dhuusanareb.
Sidookale Nabdoonka ayaa sheegay in arintaasi aysan aheyn wax la aqbali karin waxa uuna sheegay in odayaal dhaqameedku aysan aheyn dad ajnabi ah oo ay tagi karaan, balse ay jiraan Odayal ku sugan deeganada Galmudug oo xaq uleh inay ka qayb galaan shirka, waxuu tilmaamey in odayaal dhaqameedku ay yihiin dadkii wax galka ahaa ee ka dhex yimid bulshada qeybeheeda kala duwan.
Hadalka nabadoon shire yuusuf ayaa imaanaya iyadoo magaalada dhuusamareb maalinimada sabtida ah uu ka furmidoono shirka dib u hishiisiinta beelaha galmudug iyadoona 5-tii bishii ogoust uu baaqdey shirkaasi.